Isilingo esibulalayo: izingubo zangaphansi zikaJanelli eziyigugu
Imfashini Yabesifazane Izesekeli
Ubucwebe bezinhlakanipho I-Dzhanelli yembula ukuthi isiphi isimo semvelo yesifazane: zilula futhi ziyinkimbinkimbi kakhulu ngesikhathi esifanayo, zifihla ama-subtexts amaningi. Iqoqo elilandelayo lomkhiqizo waseMoscow lanikeza igama lezinto ezithokozisa uZemeckis ngePfeiffer enhle kakhulu endimeni yendikimba. "Kukhona phansi" kuyindaba mayelana nezinzwa, ubuciko bezinhlamvu nomdlalo oshisayo ngokuvumelana nayo yonke imithetho yokukhohlisa.
Izinhlobonhlobo zokukhohlisa: incwadi entsha yamanoveli ngo-Dzhanelli
Izindwangu ezivela ochungechungeni Lokho Okungaphansi - ukutholakala okuphelele kokuhlelwa kwezinto ezicwengileko ezingamkeli izitayela zanamuhla emazingeni. Ama-headset awakhiwe nje ukuze agcwalise izingubo ezinhle zobisilika, i-lace kanye ne-satin - bona ngokwabo baba yizingubo zangaphansi zokugqoka ama fashionistas. Imikhanda kanye nezinsimbi ezivela emiceleni encane yegolide neyesiliva ziphinda ziphindaphindiwe izingqikithi ze-bra evulekile, imigexo ihlanganisa ama-corsets ama-sexy nge-stockings kanti ngesikhathi esifanayo isebenza njengamabhande angavamile ngamapulangwe angenasici, izinkemba zesigqila zimboza amabhulashi, izimbongolo, izinyawo nezinyawo ngamaphethini wokuhamba. Lokho Okungaphansi Kwenkathi lapho umqondo ovusa amadlingozi uba umkhuba omuhle, omuhle ekungenasici kwawo.
Imihlobiso enhle kakhulu ye-Dzhanelli - kulabo abavulelekile
Abaqambi bomkhiqizo balinganisela ngamabomu emgodini wokunambitheka okuhle nokukhululeka ngokweqile, okwenza kube nesithakazelo ngokuzenzekelayo nokulangazelela ukuhlolwa. Noma kunjalo, ukunambitheka okuhle emgqeni Lokho Okungaphansi Kwezinto Kuningi kunoma yini enye: ubucwebe be-sexy buhlukaniswa nomklamo we-laconic kanye nokungafani kahle. Ukuphela kwenkululeko - izimpendulo eziphumelelayo: ubuhlalu be-matte kanye ne-zirconia ye-cubic ehlathini lobucwebe.
I-Dzhanelli Jewelry Engaphansi Kwempuphu Yokugqugquzela Umkhankaso
Izesekeli zeMfashini kanye nemibala ye Spring
Izindwangu, izigqoko nezinhlamvu: okumele ukhethe
Isikhwama seqembu lokuqeqesha kanye nemibono yokudala
Izingubo eziphezulu ze-TOP-3 zendwangu yesisekelo
Ubuciko bokuphindukuzalwa: indlela yokudala isithombe esifanele ngosizo lwezinto zokuhlobisa
UPandora unikeza iphupho: umhlobiso ophelele woNyaka Wonyaka Omusha
Yini okufanele ibe esikhwameni
Indlela yokuyeka ukubhema kanye naso sonke
Isitshalo sangaphakathi sase-muraya
Njengomfana kuhle ukuthi cha
Kungani uthando lwalubizwa ngokuthi ukuthandana?
Indlela yokwenza umangala kumyeni wakhe ngosuku lwakhe lokuzalwa?
UMaria Kozhevnikova wamangala abalandeli bakhe ngesandla esilimele, isithombe
Inkulumo ehambisanayo yokufunda esikoleni
UNicole Kidman uyavuma ukuhalalisela
Isobho se-garlic cream
I-ayisikhilimu ice cream
Amakhekhe nge kiwi: 3 zokupheka best
Indlela yokubopha izibopho ngezinyosi zokubopha?
Imaski yesikhumba senkinga ekhaya
Indlela yokwenza kahle ukuhlanza kwentwasahlobo
Isobho se-Beetroot nge-fennel ne-apula
Funny and fussy chastushki ngoFebhuwari 23